mushaTURKEYDunhu reMarmara34 Istanbul2020 Yavuz Sultan Selim Bridge Toll
02 / 01 / 2020 34 Istanbul, GENERAL, hyperlinks, HIGHWAY, Dunhu reMarmara, TURKEY
gore Yavuz Sultan Selim Bridge
2020 Yavuz Sultan Selim Bridge Toll; Mitero yeYavuz Sultan Selim Bridge, iyo yechitatu pearl yeBosphorous, yakawedzerwa pamwe new gore.
Yavuz Sultan Selim Bridge akabhadhara mari ye14 muzana kumotokari dzinoda kushandisa mota.
Yavuz Sultan Selim Bridge Nyowani Diki
(Inoshanda kubva 01/01/2020 na00:00)
VEHICLE CLASS Yavuz Sultan Selim Bridge Fee Chirongwa (TL)
Nyamavhuvhu 15 Nyamavhuvhu Martyrs 'Bridge uye Fatih Sultan Mehmet Bridge mutero hauna kushandurwa. Mabhiriji ese ari maviri akamutswa makumi maviri muzana Gumiguru apfuura.
Yavuz Sultan Selim Bridge kana Yechitatu Bosphorus Bridge bhiriji rakavakwa kuchamhembe kweBosphorus rakatarisana neBlack Sea. Iro zita rakapihwa Selim I, wepfumbamwe Ottoman sultan uye wekutanga Ottoman caliph. Iyo nzira yebhiriji iri munzvimbo yaSarıyer's Garipçe padivi reEurope uye Poyrazköy mudunhu reBeykoz padivi reAnatoli.
Bhiriji racho rakanyanya kupamhama nemamiririta 59 pahupamhi, iro rakareba kupfuura pasi rose rakamisikidzwa nemamirimita makumi maviri neshanu kureba, yechipiri yakakwirira shongwe mumakirabhu ese ezvitima, uye yepfumbamwe yakamisikidzwa bhiriji rakamiswa nechitima chechitima chemamita 322. ndiyo bhuru refu yakareba yakamiswa nehuremu hwepakati. Iyo nheyo yakaradzikwa muna Chivabvu 1.408 uye yakavhurwa muna Nyamavhuvhu 2013 mushure mekuvakwa nekushandisa 27 mabhiriyoni emarimi mumwedzi makumi maviri neshanu.
Mepu kweTurkey Bridges
3. Bridge Toll Zviripo